Bosso shift focus to Mutare City – Nehanda Radio
Last updated Apr 30, 2018 10,228
The Bulawayo giants slipped to third after this defeat as FC Platinum leapfrogged them after leaving it late to dismiss Mutare City 1-0 at Vhengere on the same day.
Feb 24, 2020 9,214
Feb 19, 2020 9,606
Feb 19, 2020 9,560
Feb 15, 2020 15,253
And the Madinda Ndlovu-coached charges will have little time to review the Ngezi Platinum Stars’ match as they prepare for another tricky encounter against Mutare City at Barbourfields tomorrow as the Premier Soccer League have sought to utilise the Workers Day holiday to slot match day nine fixtures.
Wednesday: Yadah v Shabanie (National Sports Stadium); Chapungu v Dynamos (Ascot); Harare City v Triangle (Rufaro); Bulawayo Chiefs v Herentals (Luveve); Bulawayo City v Nichrut (Barbourfields). The Herald
Castle Lager PremierHighlandersNgezi Platinum Stars
28,593 Follow Us
Feb 27, 2020 36,848
Feb 27, 2020 15,901
Feb 27, 2020 47,094
Feb 27, 2020 25,757
Feb 27, 2020 15,772
Feb 27, 2020 14,957
Feb 27, 2020 98,480
Feb 25, 2020 89,672
Feb 26, 2020 77,752
Feb 26, 2020 77,420
Feb 26, 2020 69,936
Feb 18, 2020 160,092
Feb 19, 2020 156,767
Feb 25, 2020 129,479
Feb 15, 2020 126,530
Feb 5, 2020 103,757